Apple waxay sii deysay WatchOS 7.6.1 A Update Update | Wararka IPhone
Apple wuxuu sii daayaa watchOS 7.6.1 casriyeyn amniga ah
Shirkadda Cupertino ayaa hadda siidaysay casriyeyn loogu talagalay isticmaaleyaasha Apple Watch, kiiskan waa kan watchOS nooca 7.6.1 taas oo waxoogaa hagaajintii xasiloonida lagu saxayo iyo qaar ka mid ah dhibaatooyinkii amniga oo u muuqda inay haysteen nuqulkii hore. Laga soo bilaabo Apple waxaa lagugula talinayaa inaad ku rakibto nuqulkan cusub sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah dhammaan qalabka ku habboon.
Xaaladdan oo ah noocyadii hore ayaa dhawaan la sii daayay, taas oo macnaheedu yahay taas gudaha Cupertino waxaad ku aragtay dhibaato amni ama cillad weyn waxayna noo soo saartay noocaan cusub si aan ugu rakibno kuweenna Apple Watch.
Waa in la ogaadaa in noocyadan la sii daayay si lama filaan ah inta badan aysan ku darin isbeddelada shaqooyinka saacadda lafteeda ama nidaamka ka baxsan adeegsiga sax dhibaatooyinka ama dhiqlaha laga helay nuqulkii hore. Noocan cusub ee watchOS 7.6.1 wuxuu u muuqdaa inuu yahay kiiska nooc dhibaato ah oo la sii daayay dhowr daqiiqo ka hor.
Si aad u rakibto nooca cusub, hubi in faylka Apple Watch wuxuu ku xiran yahay xeedho iyo baaxadda iPhone-ka ee ku xiran shabakadda Wi-Fi. Markaan helno waxaas oo dhan waxaan ku fulin karnaa cusboonaysiinta dhibaato la'aan haddii aanaan haysanin si otomaatig ah ama annaga si aan u soo dejisanno rakibidda nooca habeenkii.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple wuxuu sii daayaa watchOS 7.6.1 casriyeyn amniga ah
Sababtoo ah Meksiko ma aqaan wax ku saabsan Xoraynta, Qofba Waa Ogyahay.
Tijaabinta bateriga cusub ee MagSafe ee iPhone 12